Vinegar निर्माण र बुढेसकालमा अल्ट्रासोनिक्स - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
सिरका, जस्तै बाल्लमिक भोजन मा एक महत्त्वपूर्ण मसाज हो। हेलसिच अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू निर्माण र सिरकाको परिपक्वतामा धेरै प्रक्रियाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
सिरका उत्पादनमा पृष्ठभूमि
सिरका उत्पादन, विशेष गरी उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू, जस्तै balsamic सिरका, एक समय-उपभोग उत्पादन निर्माण प्रक्रिया हो। सिरका एक अम्लीय तरल हो जुन ओक्सीकरण द्वारा उत्पन्न गरिन्छ वा इथेनॉल को किण्वन को कारण। सिरका को मासु, सेलुलोज र एसिटिक एसिड ब्याक्टेरिया को एक पदार्थ, सिरका बारी को अक्सीजन को माध्यम ले एसिटिक एसिड मा उत्पन्न गर्दछ। यस ओक्सीकरण प्रक्रियाले एसिडलाई उत्पन्न गर्दछ जसले सिरकालाई यसको सामान्य खट्टा स्वाद र हल्का पुङ्गो गन्ध दिन्छ। एसिटिक एसिड जीवाणुद्वारा समग्र रासायनिक प्रतिक्रिया (acetobacteraceae) छ:
सी2एच5OH + O2CH3COOH + एच2O
एसिटिक एसिड एकाग्रता तालिका सिरका को लागि4देखि 8% बीच भिन्न हुन्छ र सिरका उठाने को लागि 18% बढ्छ।
सिरका मा अल्ट्रासोनिक प्रभाव
अल्ट्रासोनिक्स विभिन्न उद्देश्यका लागि सिरका निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै प्रभावहरू सजिलै देखाउन सकिन्छ केहि सेकेन्डका लागि सिरका को एक नमूना सोधे।
धुलो र कम एसिडिक स्वाद
सिरकामा सोनिक गरिएको छ, एसिडिक खट्टा स्वाद बन्छ महत्त्वपूर्ण र स्वादिष्ट। यो एक रोचक आवेदन हो जुन चिकनी दाखिलाको लागि उच्च मांग हो जुन भोजनमा राम्रो स्वादिष्ट खाना बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सिरका मौसम सीजन सलाद ड्रेसिंग, मासु र माछाको भाँडा, सस र साथै डेसर्टको लागि अनुकूलित मसाज हो। विशेष गरी उच्च ग्रेड balsamic सिरका पनि एरिटिफ या पाचन को रूप मा स्वाद गरिएको छ।
बेल्जियमको बोसामिक (UP400S):
यस भिडियोले हेलस्चर अल्ट्रासोनिकेटर UP400S बेनास्मिक सिरकाको Sonicating प्रदर्शन गर्दछ।
UP400S प्रयोग गरेर बालसामिक भिइनगरको Sonication
सामान्य सिरका स्वाद को विविधता गर्न को लागी, सिरका अक्सर अक्सर स्वादहरु (जस्तै ऋषि, थिम, अजगानो, टरागन, गुलाबी, तुलसी), अदरक, मिर्च, या फलहरु (जस्तै रस्पबेरी, जस्तै विभिन्न स्वादयुक्त पदार्थहरु लाई जोडएर ओक्सीडिएटिव किण्वन को स्वाद पछि स्वाद गरिन्छ। ब्ल्याकबेरी, सुन्तला, आम, चूना)। अल्ट्रासोनिक रूप देखि मदद को निष्कर्ष लाई बढावा दि्छ स्वादहरूको रिहाई सेल म्याट्रिक्सबाट सिरकामा। को बारे मा अधिक पढ्नुहोस् अल्ट्रासोनिक निकासी।
परिपक्वता र सिरका को उठाना
काठ बिरलेमा सिरकाको परिपक्वता र उमेरको उमेर (जस्तै चेरी, छातीपट्टि, ओक, चकलेट, आश वा जुनूनी बैरल) धेरै लागत-गहन र सजिलो हुन्छ, सिरका प्रायः प्लास्टिक ट्यांकमा बनाइन्छ। बैरल परिपक्वता को प्रसिद्ध काठ को स्वाद को नकल गर्न को लागि, जो शीर्ष गुणवत्ता सिरका को लागि सामान्य छ, सिरका निर्माताहरु ओक पाउडर वा ओक चिप्स (भनिन्छ ‘वैकल्पिक') वा काठको स्वाद सुन्तला। ओक स्वादको संतोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न, सामान्यतया ओक चिप्स कम्तिमा4को लागि रहनु पर्छ –6हप्ता सिरकामा यसैले कि तरल काठको फाइबरले अवशोषित गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ वैकल्पिक अप्ठ्यारो को यो प्रक्रिया को गति महत्वपूर्ण। Additive ओक पाउडर वा ओक चिप्स संग ध्वनि चिन्ह, अल्ट्रासाउंड को अत्यधिक गहन शक्ति र उत्पन्न अल्ट्रासोनिक cavitation ओक स्वाद को निकासी मा मदद गर्दछ। अल्ट्रासाउन्डले उच्च रक्तचाप र कम दबाव चक्रलाई वैकल्पिक बनाउँछ जुन पौधेको सेतो र सिरका बीचको उच्च मासिनो स्थानान्तरण गर्दछ। यसबाहेक, ओक पाउडरको कण कणहरू राम्ररी राम्रोसँग फैलिएका छन् किनकि अल्ट्रासाउन्ड फैलाउन निकै प्रभावकारी माध्यम हो।
अल्ट्रासाउन्ड फूड उद्योगमा छ त्यसैले पहिले स्वादको निष्कासनको लागि एक ज्ञात विधि। यसको अत्यधिक ऊर्जावान गुफात्मक शक्तिहरु द्वारा, sonication कोशिका पर्खालहरु लाई तोड्छ र इंट्रा सेलुलर सामाग्री उपलब्ध छ। किनकि बिरुवाको सामग्री (काठ फाइबर) सानो कणमा भाँडामा पर्दछ, अधिक स्वादजनक सारहरू जिब्रोको जस्टिन तंत्रिका लागि उपलब्ध हुन्छन्। अल्ट्रासाउन्डको दोस्रो फाईदा ठोस कणहरूको तरल पदार्थमा प्रभावकारी हुन्छ।
सिरका को रंग
अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी इम्युइलिङ, फैलावट र भंग गर्न को लागी एक कुशल विधि हो। यो सिरका निर्माण मा उपयोगी छ जब उदाहरण कोमल रंग को सिरका मा जोडिएको छ। कारमेल रंग (खाद्य एसिड E150) सबै भन्दा पुरानो र सबैभन्दा बढी क्लेली को खाने रङ प्रयोग गरिन्छ। अत्यधिक चिपचिपा रङ तरलले सिरका को वांछित गाढा खैरो रंग दिन मद्दत गर्दछ।
सिरका उत्पादन र उमेर बढाउने प्रक्रियामा अल्ट्रासोनिक्सको अनुप्रयोग धेरै सरल छ। सानो ब्याच मापन – 2L सम्मका लागि – तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला उपकरणहरू, जस्तै UP400S।
उत्पादन प्रक्रियाको लागि, हेलसेस्टर प्रस्तावहरू औद्योगिक अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू सेल सेल रिएक्टरहरू जस्तै, जस्तै UIP1500hd। यो प्रणाली इनलाइन काम गर्दछ, उदाहरणका लागि जब तपाइँ एक ब्याचबाट अर्कोमा पम्प गर्नुहुन्छ।
आज हाम्रो सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईंको प्रशोधन आवश्यकताको बारेमा कुरा गर्न! हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी हुनेछौं!
तपाईंका प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहोस्!
बेल्जियमको बोसामिक (UP400S)
पेट्रो रेस्टुरेन्टहरूमा अल्ट्रासोनिक्स